အောင်လံမြို့၌ ယခင်နှစ်များထက် နှမ်းဈေး ပိုရနေသော်လည်း မိုးများနေသောကြောင့် နှမ်းအထွက်နှု? - Yangon Media Group
အောင်လံမြို့၌ ယခင်နှစ်များထက် နှမ်းဈေး ပိုရနေသော်လည်း မိုးများနေသောကြောင့် နှမ်းအထွက်နှု?
မကွေး တိုင်းဒေသကြီး သရက်အောင်လံ မြို့နယ်အတွင်း နှမ်းအသစ်များ ပေါ်ချိန်တွင် နှမ်းဈေးမှာယခင်နှစ် များထက် ဈေးပိုရနေသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် နှမ်းအထွက် နှုန်းလျော့ကျနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှသိရသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ရေ ပေါ်ကျေးရွာ၊ စမ်းကလေးကျေးရွာ၊ အောင်မြေကုန်းကျေးရွာနှင့် ရွာမထုံးကျေးရွာများတွင် နှမ်းစိုက်ပျိုး မှုအများဆုံးဖြစ်ရာ ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်မှ စတင်ကာမိုးများနေ့စဉ် ရွာသွန်းနေမှုကြောင့် သီးနှံပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ယခုအခါ နှမ်းများရိတ်သိမ်းချိန်ခါတွင်လည်း မိုးများရွာသွန်းနေခြင်းကြောင့် သီးနှံအရည်အသွေးလျော့ကာ အထွက်နှုန်းပါ လျော့ကျခဲ့ရသည်။
”နှမ်းဈေးကအရင်နှစ်တွေထက် ဈေးပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ မိုးကဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ နေ့တိုင်းရွာနေတော့ သီးနှံအထွက်နှုန်း ကထင်သလောက်မရပါဘူး။ တချို့ ဆိုမိုးကြောင့် ရေဝပ်ပြီးပျက်တာ တောင်ရှိပါတယ်” ဟု အောင်လံ မြို့နယ် စမ်းကလေးကျေးရွာမှ တောင်သူကိုသိန်းဇော်ကပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း သိပ္ပံနှမ်းနက် (စမုံနက်)ကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြခြင်းဖြစ်ပြီး မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ GAP နည်းဖြင့်ကျေးရွာခြောက်ရွာမှ ဧက ၁၄ဝဝ စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ယင်း GAP နည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးထားသော နှမ်းများကို မြို့နယ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့် အောင်ကျွန်းသာ ကုမ္ပဏီတို့က ၄၅ ပိဿာတစ်အိတ်လျှင် ကျပ်ငါးထောင်ဈေးပိုမိုပေး ကာဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။
”အောင်လံမြို့နယ်အတွင်းက GAP နည်းနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ နှမ်းနက်တွေကို ကျပ်ငါးထောင် ဈေးပိုပေးပြီးဝယ်ယူဖို့ သြဂုတ်လလယ်က မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးရုံးမှာ တောင်သူတွေနဲ့ ဝယ်လက်နဲ့စာ ချုပ်ချုပ်ပါတယ်” ဟုမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အောင်လံမြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်ကုန်စည်ဈေးကွက်၌ သိပ္ပံနှမ်းနက် (စမုံနက်) ၄၅ ပိဿာတစ်အိတ်လျှင်ကျပ် နှစ်သိန်း ဈေးနှင့်ကျပ် ၁၉၅ဝဝဝ ဈေးရှိပြီး နှမ်းပြာသန့် ၄၅ ပိဿာ တစ်အိတ်လျှင်ကျပ် ၁၇ဝဝဝဝ ဈေးနှင့်နှမ်း အနီနှင့်အဖြူ ၄၅ ပိဿာတစ်အိတ် လျှင်ကျပ် ၁၄၅ဝဝဝ ဈေးများရှိရာ နှမ်းအသစ်များ ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှုနည်းနေကြောင်း မြို့နယ်ကုန်သည် ကြီးများအသင်းမှ သိရသည်။
အင်းဝမြို့ဟောင်း တတိယမြို့ရိုးမှ ကျိုးပေါက်သွားသည့် နေရာများကို အကြီးစား ပြုပြင်မည်
ပညာရေးကောလိပ် (မကွေး)မှ ပြန်စွန့်လွှတ်သည့် ယာမြေဧက ၄ဝ ကျော်အတွက် ယာယီ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု လက်မ?